Hery Rajaonarimampianina : « Tsy financement parallèle ny fanampiana avy amin’i Sina » -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : « Tsy financement parallèle ny fanampiana avy amin’i Sina »
Hentitra ny fanazavan’ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina mahakasika ny fanampiana avy amin-dry zareo Sinoa. « Tsy fahalalana ny tontolon’ny fitantanam-bola iraisam-pirenena sy ny toekarena eran-tany ny filazana fa « financement parallèle” ny fanampiana avy amin’i Sina », hoy ny filohan’ny Repoblika.
Noho izay indrindra, nohamafisiny fa manana tanjaka goavana any Azia i Sina ary ireo firenena tandrefana marobe manana tanjaka ireo aza mbola miankina tanteraka amin’ireo fikambanana sy andrim-panjakana amin’ny fitantanam-bola sy ara-bola Sinoa, toa ny banky sy ireo orinasa mpampiasa vola, sns.
Nambaran’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ihany koa fa samy mamaly ny sivana rehetra ny fanampiana avy amin’i Sina sy ireo firenena tandrefana. Saingy, mahatsara toerana an-dry zareo Sinoa fotsiny ny fanajany tanteraka ny fifanarahana…
Ankoatra izay, anisan’ireo firenena mandray anjara amin’ilay Fihaonamben’i Boao (province de Hainan) amin’i Azia i Madagasikara. Araka izany, manao fitsidihana ara-panjakana any Sina, amin’izao fotoana izao, ny filohan’ny Repoblika miaraka amin’ny delegasiona malagasy, ahitana mpikambana eo anivon’ny governemanta sy ireo mpandraharaha ara-toekarena.
Etsy andaniny, mandritra ity fitsidihana any Sina ity no hihaonan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ny filohan’ny Repoblika Entim-bahoakan’i Sina, Xi Jinping. Amin’izany indrindra no hiresahana sy handinihan’izy ireo ireo fomba hiaraha-miasa rehetra eo amin’ny firenena roa tonta, sns. Marihina fa hisy koa ny fihaonana ara-toekarena “sino-malgache” mba hisian’ny fiaraha-miasa eo amin’ny samy sehatra tsy miankina.
Tombony ho an’i Madagasikara ny fiatrehana io fihaonambe any Sina io ho an’ny fampandrosoana ara-toekarena, eo amin’ny fotodrafitrasa, toa ny lalana, “autoroute”, ivon-toeram-piofanana maro isan-tokony, sekoly, sns.
L.T (Chine) sy MN
Ny mpanjakan’i Maraoka, Mohamed VI no nisantatra ny fahatongavan’ireo filoham-pirenena hanatrika ny fihaonana an-tampon’ny Frankofonia hanomboka rahampitso. Ny sabotsy teo tamin’ny 7 ora sy 50 minitra alina no nigadona teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ny Boeing ...Tohiny